Evinrude3HP က Lightwin Tune-Up ကိုစီမံကိန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
Evinrude3HP က Lightwin Tune-Up ကိုစီမံကိန်း
သင် Evinrude3HP က Lightwin, ဒါမှမဟုတ်အလားတူ Tune-UP စီမံကိန်းအကြောင်းမှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါကအောက်ပါသူတို့ကိုစွန့်ခွာပါ။
ရမယ် Login သငျသညျမှတ်ချက်များစွန့်ခွာရန်ဆန္ဒရှိလျှင်။
ကတင်ပြ positron 06: 29 - Thu, 2017 / 23 / 23 အပေါ်
ငါ3မြင်းကောင်ရေ 1952-54 (JW-1) ဂျွန်ဆင်ပေါ်လှုံ့ဆျောပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါမပါဘဲ ယူ. သကဲ့သို့, အောက်ပိုင်းယူနစ်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲကျသွားသည်။ ယခုမော်တော်ကားရှတ်ဟာပန်ကာထိတွေ့ဆက်ဆံမထားဘူး။ ဒါဟာအားလုံးလမျး၌တွန်းသည်။ အဆိုပါပန်ကာကိုဖွင့်စေသည်အဓိကသို့မဟုတ်တခြားမှော်ရှိပါသလား?
ကတင်ပြ boatman350 01: 23 - Wed, 2019 / 10 / 29 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ မော်တော်ကားရှတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမည်မဟုတ် by positron
ထို့နောက်ကိုယ်အောက်ပိုင်းယူနစ်ကိုချွတ် ယူ. ရှပ်လမ်းအပေါင်းတို့၌ဖြစ်ပုံရပေမယ့်သူကကိုယ့်ဦးအောက်ပိုင်းယူနစ်ကိုင်ထားလျှင်ကျားကန်မျက်နှာကျက်ဆီသို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တွေ့သင်လိမ့်မည်သည့်အပေါက်မှမကြည့်ခဲ့အတူတူပြန်ထား ယင်းရှပ်ဖွင့်ဖြစ်သင်မူကား, ဒါကြောင့်ကိုင်ထားလျှင်ကျားကန်မြို့ရိုးအရာကဲ့သို့သေးငယ်တဲ့ key ကိုရင်ဆိုင်နေရသည်ထွင်းဖေါက်သို့ထွက် pop ပါလိမ့်မယ်
ကတင်ပြ boatman350 06: 06 - Thu, 2019 / 07 / 26 အပေါ်
ကိုယ့်အနိမ့်ယူနစ်ကိုယူသောအခါ drive ကိုရိုးတံငါ့ကိုများအတွက်ယူနစ်အတွက်စီးနင်းမဟုတ်ဘူးပယ်ဈငါကျားကန်မျက်နှာကျက်ဆီသို့ဦးတည်တက် facing ဘေးတိုက်အောက်ပိုင်းယူနစ်ကျင်းပရန်ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ် "သော့" အမျိုးအစားလည်းမရှိသတိပြုမိ
ကတင်ပြ ttravis 06: 29 - Thu, 2017 / 23 / 42 အပေါ်
ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပုံဖြစ်ပါတယ်။ https: / ...
- Update- ငါ link ကို fixed ။
ကတင်ပြ positron 06: 30 - Fri, 2017 / 22 / 54 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဒီနေရာမှာတစ်ဦးပုံဖြစ်ပါတယ်။ https: / ... by ttravis
ပုံမှ Link ကိုအသေဖြစ်၏။ မရ ...
ပုံမှ Link ကိုအသေဖြစ်၏။ youtube "youtu.be" ကဘာလဲဆိုတာသေချာပေမယ့်မ!
ကတင်ပြ ttravis 07: 01 - Sat, 2017 / 07 / 04 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ပုံမှ Link ကိုအသေဖြစ်၏။ မရ ... by positron
အကြှနျုပျ၏မကောင်းတဲ့ .... ဒီကြိုးစားပါ http: ...
အကြှနျုပျ၏မကောင်းတဲ့ .... ဒီကြိုးစားပါ: http://www.marineengine.com/parts/johnson-evinrude-parts.php?year=1957&…
ကတင်ပြ jakeboat 07: 10 - မွန်, 2017 / 23 / 17 အပေါ်
ဤတွင်ကျွန်မရှိသည်မြင်ကွင်းဖြစ်ပါသည်, ဤငါ၏အမေးခွန်းများကိုများအတွက်မှန်ကန်သောနေရာသို့မဟုတ် format ကိုမပါလျှင်ကျွန်မကြိုတင်တောင်းပန်ပေမယ့်ဤကဲ့သို့သောဖိုရမ်များအသစ်ဖြစ်၏။ ငါငါးဖမ်းချစ်သောသူသည်သားနှင့်ကျွန်တော်ကမ်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ငါးမျှားခဲ့ကြပေမယ့်သူဟာရေကန်များပေါ်ထွက်ရစလေိုကွောငျးအလုံအလောက်ဟောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းသောသတင်းကျနော်တို့မင်နီဆိုတာအတွက်ရေကန်များဤမျှပဒေသာအသက်ရှင်နေထိုင်ဖြစ်ပါသည်, မကောင်းတဲ့သတင်းကျွန်မအများကြီးလှေန်းကျင်ခဲ့ဖူးဘူးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်စုံတစ်ဦးကများနှင့်မော်တာ lightwin တစ် evinrude 14hp နေ 3'boat / နောက်တွဲယာဉ်ရတယ်။ ကောင်းသောစတင်သူတို့ကဒဏ်ငွေပြေးကဆိုသည်။ ကျနော်တို့စုံတွဲတစ်တွဲကြိမ်ထုတ် ယူ. ok သို့ပွေးလေ၏။ ok အားဖြင့်သာငါအပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာနေဆဲအလွန်နှေးကွေးခဲ့ပေမယ့်ငါ Eh က 3hp င်ထင်ဆိုလို, ငါက run ဖို့အတှကျအပြည့်အဝပေးရန်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ3/4စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်။ ထိုအခါကချက်ချင်း, အသေခံရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါဖြစ်ကောင်းရှိရာကသင့်အကြောင်းကအကြောင်း3စက္ကန့်လမ်းဖွင့် revved အကြိမ်အနည်းငယ်သတိပြုမိသည်။ သို့သော်ထိုသို့နီးပါးအိုင်ထဲမှာသောင်တင်နဲ့ကျွန်မကျွန်တော်တို့ကိုအတူတူတက် fix ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါ2သံသရာမော်တာသစ်များဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကျွန်မပလပ်ပြောင်းလဲလတ်ဆတ်စတင်ရန်လုံးဝဓာတ်ငွေ့ရှင်းလင်းထားခဲ့သည်။ ကတင့်ကားထားရှေ့မှာကဲ့သို့တူညီသောပွေးလေ၏။ / ဦးတည်ချက်မဆိုလမ်းညွှန်မှုတန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦး carb ကိရိယာအစုံအကောင်းတစ်ဦးက start တူဒီ site ကိုဖတ်ရှုခြင်းမှအသံ။ မဆိုအကြံပြုချက်များ?
မော်တော်မော်ဒယ် 3e lightwin Evinrude 3602hp ဖြစ်ပါတယ်။
ငါလှေမော်တာအကြောင်းကိုငါ့အကောင်လေးသင်ပေးကူညီနိုင်မှချစ်ကြလိမ့်မည်နှင့်ဤတဦးတည်းကောင်းတစ်ဦး starter စီမံကိန်းကိုနဲ့တူပုံရသည်။
ကတင်ပြ ttravis 07: 10 - မွန်, 2017 / 23 / 35 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အကူအညီလိုတယ် by jakeboat
စက်နှိုးမှာအကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ အဟောင်းကိုအသစ်အကွိုင်လိုအပ်တယ်, သင်မှာရှိနေစဉ်အဖြစ်ကောင်းစွာမှတ်ခြင်းနှင့် condencer ကိုပြောင်းလဲစေမည်အကြောင်းအားလုံးငါအားလုံး3HP ကမော်တာကိုဆိုလိုတာ။ သငျသညျသူတို့အားအစိတ်အပိုင်းများသူတို့ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ရှိမရှိကိုလည်းမမပြောလို့မရပါဘူး။
ငါ၏အ3နှင့်လည်း 5.5 မြင်းကောင်ရေစက်နှိုးညှိ-up, စာမကျြနှာကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။
ကတင်ပြ jakeboat 07: 10 - မွန်, 2017 / 23 / 42 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ မှာအကောင်းတစ်ဦးကိုကြည့်လိုက်ပါ ... by ttravis
ကတင်ပြ သိုးထီးတကောင်ကိုဂျက် 02: 11 - Sun က, 2018 / 23 / 20 အပေါ်
ကိုယ့်တစ်ဦးဂျွန်ဆင်3HP ကဝယ်ကတက်ကိုပြုပြင်တာတွေနေပါတယ်။ ငါပဲ့ချိတ်နဲ့2သံသရာအင်ဂျင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံမျှတသောငွေပမာဏရှိသည်။ သင့်ရဲ့ post ကိုနောက်ဆုံးဇူလိုင်လတင်သွင်းပေမယ့်ကိုယ့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ငါသိစေမဆိုအကူအညီတောင်း၏ဖြစ်နိုင်လျှင်။ အကြှနျုပျ၏ဂျွန်ဆင်3အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများကိုစောင့်ဆိုင်းယခုဆိတ်ကွယ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ပျော်စရာလွယ်ကူအင်ဂျင်ရဲ့ - ဒါဟာလဲဖြစ်ဖို့ဒီဇိုင်းခဲ့သည်။ အမှု၌သင်တို့ကိုဂျွန်ဆင်နှင့် Evinrude တူညီတဲ့အခြေခံအင်ဂျင်များမှာမသိရပါဘူး။
ကတင်ပြ jakeboat 08: 01 - အင်္ဂါနေ့, 2017 / 20 / 41 အပေါ်
ဒါကြောင့်ငါသည်ဤ site ကိုမှ Amazon ကျေးဇူးတင်စကားထံမှစက်နှိုးစနစ်အပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုလေ။ ဒါဟာစူပါလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသည်တဘုံအုမ်းမီတာကို အသုံးပြု. အချိန်ကိုက်၏အချက်မှတက်စက်နှိုးညှိနောက်တော်သို့လိုက်နဲ့ကျွန်မဆုံးရှုံးခဲ့ရပါ၏ဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။ ငါလျှပ်စစ်နှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမသိရကြဒါကြောင့်ပွင့်လင်းကဲ့သို့ဝေါဟာရများအဆုံးမဲ့စသည်တို့ကိုငါ့ကိုရှုတ်ထွေးနေပိတ်လိုက်တယ်။
ငါကစမ်းသပ်ဖို့ဘာ tool ကိုလိုအပ်သလဲ? ငါနှစ်ဦးစလုံးဆောင်ဘယ်မှာပူးတွဲသလဲ? အဆိုပါ tester အလိုအလျောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုစတိုးဆိုင်မှာကောင်လေးငါ့ကိုသာဒီတော့ငါကမှားမီတာင်ထင်တဦးတည်းကလစ်ရှိပါတယ်ရောင်းချခဲ့? အဘယ်သို့ငါအရေအတွက်ကတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဖြစ်သည့်ပြောပြသလဲ?
ကတင်ပြ ttravis 08: 01 - အင်္ဂါနေ့, 2017 / 23 / 23 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဒါနဲ့အားလုံးကိုအစိတ်အပိုင်းများတယ် ... by jakeboat
ရိုးရှင်းတဲ့ circuit ကိုမြင်ယောင် ...
သင်တစ်ဦးဘက်ထရီနဲ့အလင်းမီးသီးရှိသည်ဘယ်မှာရိုးရှင်းတဲ့ circuit ကိုမြင်ယောင်။ သငျသညျထို့နောက်မီးသီးထဲကနေပြန်ဘက်ထရီဖို့မီးသီးမှဘက်ထရီကနေဝါယာကြိုးရှိသည်, အခါ, သင်ကပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ရှိသည်။ ကဘက်ထရီနှင့်အခြားဘက်ခြမ်းသို့တဦးတည်းဘက်ထွက်ဝင်တခါလျှပ်စစ်မီးတစ်အပြတ်အတောက်လမ်းကြောင်းထဲမှာစီးဆင်း။ သင်ဝါယာကြိုးများ၏တဦးတည်းရပ်ဆိုင်းခြင်းများလုပ်ခဲ့ကြသည်လျှင်, သင်တစ်ဘုံအလင်း switch သည်အလင်းမီးသီးမှတိုက်နယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်သကဲ့သို့တိုက်နယ်ဖွင့်မယ်။ ရေအဆို့ရှင်ကိုသင်ပွင့်လင်း .... ဆင်တူအလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်သူတို့ကိုပိတ်ပါ။
အဘယ်အရာကိုသင်တို့အဘို့စမ်းသပ်နေသော flywheel အပေါ်အခြိနျဇယားအမှတ်အသားများမှန်ကန်စွာ stator အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားနှင့်အတူ aligned သောတိကျသောအချိန်တွင်နီးစပ်သည့်အနိုင်အထက်အချက်များကိုသေချာဖြစ်ရမည်။
သင်သည်သင်၏အုမ်းမီတာကိုယူပြီးအတူတကွနှစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမထိခဲ့လျှင်, သင့်အုမ်းမီတာ0သို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောတိုက်နယ်ပြသပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမထိကြဘူးလျှင်, စာဖတ်ခြင်းအသင်္ချေသို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ် circuit ကိုရလိမ့်မည်။ တချို့ကအုမ်းမီတာမီတာတိုက်နယ်ပိတ်ပါသည်ထို့နောက် Buzz လိမ့်မယ်တဲ့ setting ကိုရှိသည်။ ဒါကဆက်လက်စမ်းသပ်ဟုခေါ်သည်။
တစ်ဦးအုမ်းမီတာတိုက်နယ်ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ရဲ့ကျွန်တော်တစ်ဦးဘုံအိမ်ထောင်စုအလင်းမီးသီးစမ်းသပ်ချင်ဆိုပါစို့။ သငျသညျဗဟို connector ကိုမှာတဦးတည်းမှမီးသီးများ၏အခြေစိုက်စခန်းတခုတခုအပေါ်မှာအုမ်းမီတာ၏ခဲ, နှင့်အခြားသောထားလျှင်, အုမ်းမီတာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမှမီးသီးဝိုင်ယာကြိုးမှတဆင့်စီးဆင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဝိုင်ယာကြိုးကျိုးသည်ဆိုပါကတစ်ဦးအဆုံးမဲ့ခုခံအားဖြင့်ညွှန်ပြသကဲ့သို့, circuit ကိုဖွင့်လှစ် (လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအနိမ့်ဗို့အားမှာလေထုကိုဖြတ်ပြီးစီးဆင်းပါဘူး) ဒါကြောင့်တိုက်နယ်ပွင့်လင်းပြီးမီးသီးထွက်ကိုမီးရှို့သည်။ သငျသညျ0သို့မဟုတ်နီးပါး0သောအုမ်းမီတာအပေါ်တစ်ဦးစာဖတ်ခြင်း get လျှင်, လျှပ်စစ်မီးဟာဝိုင်ယာကြိုးများနှင့်မှမီးသီးမှတဆင့်စီးဆင်းနေသည်ကောင်းသောဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါ ohmmeter အဆိုပါမီးသီးတက်ပွင့်လင်းဖို့လုံလောက်တဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးပို့ဒါပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်ပါဘူးဆက်လက်စစ်ဆေးဒါမှမဟုတ် circuit ကို wether ပွင့်လင်းသို့မဟုတ်တံခါးပိတ်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှာတစ်ဦး youtube ကဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယို အကြောင်းအရာပေါ်မှာ။
ကြှနျတေျာ့မှာအနီးကပ်ကြည့်လိုက်ပါ 5.5 HP ကစက်နှိုးစာမျက်နှာ ငါအချိန်ကိုက်စမ်းသပ်ဖို့ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အကိုရှင်းပြကြပါရှိရာ။ ဒါဟာတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမော်တာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စက်နှိုးစနစ်အတူတူပင်အတိအကျအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ငါများသောအားဖြင့် 3.5 နှင့် 5.5 HP ကနှစ်ဦးစလုံးကိုဖတ်ရှုဖို့လူတွေကိုတိုက်တွန်းပါသည်။
သင်သည်သင်၏အနိုင်အထက်အမှတ်ဝါယာကြိုးများ၏တဦးတည်းအတိုအပိုင်းအစချိတ်ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အုမ်းပေါ်တွင်သင်၏စမ်းသပ်ဆောင်အချိန်ကိုက်စမ်းသပ်ဖို့ flywheel အောက်မှာ fit လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ စမ်းသပ်ခြင်းဝါယာကြိုးများ မိကျောင်းကလစ်များနှင့်အတူစျေးပေါနှင့်နေရာလေးကိုဖြစ်ကြသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဒေသဆိုင်ရာဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်မှသူတို့ကိုအရ, ဒါမှမဟုတ်နိုင်ပါတယ် အမေဇုံ။ အဆိုပါ 5.5 မှာပြထားတဲ့အတိုင်းသင်ကပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကွိုင်နှင့် condenser ဝါယာကြိုးများချိတ်တွဲမယ်လို့ရှိရာအနိုင်အထက်အချက်ပေါ်တွင်ဝက်အူ terminal ကိုရန်စမ်းသပ်မှုဝါယာကြိုးများ၏ clip တဦးတည်းအဆုံး။ ဆင်း stator အခြေစိုက်စခန်းထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်မှတဆင့်စမ်းသပ်ဝါယာကြိုး၏အခြားအဆုံး Feed ။
ယခုတွင်သင်သည်မြေပြင်ရန်သင့်အချက်များကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်စမ်းသပ်ခဲရန်သင့်အုမ်းမီတာ၏တဦးတည်းဦးဆောင်ချိတ်ဆက်ပြီးပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်, နှင့်အခြားသောနိုင်ပါတယ်။ မြေပြင်အသုံးပြုပုံငါမော်တာအပေါ်မည်သည့်ရှင်းလင်းသောသတ္တုသို့မဟုတ် mounting ဝက်အူကိုဆိုလိုတာ။ အဆိုပါမော်တော်ကိုယ်တိုင်ကအခြားစမ်းသပ်မှုခဲသည်။
အခုဆိုရင်သင် flywheel ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအချိန်ကိုက်အမှတ်အသားများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖွင့်စီတန်းအခါတိုက်နယ်ပိတ်လျှင်ကြည့်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
ကတင်ပြ jakeboat 08: 03 - Thu, 2017 / 22 / 21 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ရိုးရှင်းတဲ့ circuit ကိုမြင်ယောင် ... by ttravis
wow သောစူပါအသုံးဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ...
wow သောစူပါအသုံးဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီညွှန်ကြားချက်နောက်တော်သို့လိုက်နှင့်စက်နှိုးစနစ်အညှိတက်ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါပုံးတစ်ပုံးထဲမှာထားကပွေးလေ၏။ ဒါဟာအများကြီးပိုကောင်းသို့ပွေးလေ၏သို့သော်နေပါစေငါ carb ချိန်ညှိပုံကိုအလွန်မြင့်မားများနှင့်မီးခိုးရောင်အပြာမီးခိုးတက် Rev မဟုတ်ဘူး။ ငါသည်လက်ျာဖို့ညှိနှိုင်းမှုအဖုကိုဖွင့်ပေမယ့် ok ပြေးရှေ့မှာထွက် bottoms ကြောင့်ပိုကောင်းပြေး။
ငါထွက်ကပ်အဆိုပါ gasket ကနေကြည့်ရှုနိုင်မှ, ကသစ်ကိုကြည့်ရှုဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ carb ကိရိယာအစုံကိုကျော်သွားနိုင်စဉ်းစားမိတယ်။ သို့သျောလညျး, ငါမနက်ဖြန် carb ကိရိယာအစုံပြုကြလိမ့်မည်ကိုခန့်မှန်း။
လူအပေါင်းတို့သည်ကစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရဲ့အကူအညီနဲ့, ဒါပေမယ့်ပျော်စရာ / ကပညာရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ jakeboat 08: 06 - Sun က, 2017 / 18 / 16 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ wow သောစူပါအသုံးဝင်သောဖြစ်ခဲ့သည်။ ... by jakeboat
ရုံအိုင်ပေါ်မှာကနောက်ဆုံးနှစ်ရက်နေခဲ့ရသည်။ ဤ site ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ငါ့ကို afun နည်းနည်းမော်တာတက် fix ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာယခုန်းကျင်နှေးကွေးနေပေမယ့်တည်ငြိမ် putters ။ လူအပေါင်းတို့သည်အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်သန်းပေါင်းများစွာ။ ငါ၏အကောင်လေးကြီးမားတဲ့အပြုံးနှင့်အတူယနေ့န်းကျင်ကကားမောင်းခဲ့သည်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 07 - မွန်, 2017 / 01 / 18 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ရုံကနောက်ဆုံးနှစ်ရက်ကုန် ... by jakeboat
ငါသည်သင်တို့ကိုယခုသင်တို့သည်ဤမျှကောင်းစွာကြောင့်မော်တာကိုသိသောအလွန်ကြီးစွာသောနျဖိုးထားကြတာသေချာပါဖြစ်၏။ ငါသူတစ်ဦးတစ်သက်တာကြာရှည်မည်ကိုအတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုင်အောင်သင့်ကောင်လေးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါဟာလူတွေသူတို့အ 3.5 HP ကမော်တာကိုတက် fix မည်မျှအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ငါသည်ဤ site ကိုအချို့သောစာရင်းဇယားမှာရှာဖွေနေခဲ့သည်။ ရုံယနေ့ 234 လူတွေဆိုက်သွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့် 3.5 စီမံကိန်းအကြောင်းဖတ်နေအချိန်နေခဲ့ရသည်။ ဤရွေ့ကားဧည့်သည်များအားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများများစွာ၌ရှိကြ၏။ ဤသည်ကတခြားမော်တာအပါအဝင်မပေးပါ။ အဆိုပါ 3.5 ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးစီမံကိန်းဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့မော်တာခံစားကြည့်ပါကအနည်းဆုံးအားအခြား 50 နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စေနိုင်သည်။ သငျသညျအခွင့်အလမ်းရခဲ့လျှင်, ဒီမှာအချို့ဓါတ်ပုံတွေ post ။ ဥစ္စာများကဲ့သို့ရုပ်ပုံများနှင့်မှတ်ချက်များကိုငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးဆုလာဘ်ဖြစ်ကြသည်။ တွမ်
ကတင်ပြ သိုးထီးတကောင်ကိုဂျက် 02: 11 - Sun က, 2018 / 23 / 24 အပေါ်
သင်သည်သင်၏အင်ဂျင်အချိန်မရှိကြပါဘူး။ ထုတ်လုပ်တဲ့အခါသင်တို့အဘို့ပြုလေ၏။ ရုံသေချာမှတ် cam စားပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လက်ကိုင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်နှင့်ရမှတ်ပန်းကန်စနစ်တကျတပ်ဆင်ထားသည်ပါစေ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်အသစ်သောအစိတ်အပိုင်းများ, ကွိုင်, ငွေ့ရည်ဖွဲ့ခြင်းနှင့်မှတ်ရတယ်ဆိုပါကပဲသူတို့ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ကွာဟမှုအချက်များနှင့် flywheel အစားထိုးလိုက်ပါ။
ကတင်ပြ jakeboat 08: 26 - Sat, 2017 / 07 / 33 အပေါ်
ငါအခြေခံအားဖြင့်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုက်ဘ်ဆိုက်ကနေ ... အဓိပ်ပာယျ, ဒီနွေရာသီတစ် 3hp Evinrude တက် fixed သစ်စက်နှိုးအစိတ်အပိုင်းများ, carb ကိရိယာအစုံစသည်တို့။ ကျနော်တို့ကဒါဇင်ကြိမ်အကြောင်းကိုငါးဖမ်းထွက်ကို ယူ. , ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းသောပွေးလေ၏။ ဒါဟာနေဆဲလယ်ပိုင်းအကွာအဝေးအတွက်လောင်စာပေါ်မှာတိုတောင်းကဲ့သို့ sputter ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်နိမ့်အမြန်နှုန်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်အကြီးအပြေးပါပြီ။ ယခုငါသစ်တစ်ခုပြဿနာကြုံတွေ့ကြသည်။ ကျနော်တို့လှေပစ်လွှတ်ရာမှထပ်မံပြုလုပ်ယူပြီးခဲ့ကြခြင်းနှင့်အပြေးလောက် 15 မိနစ်အကြာတွင်တကယ်မကောင်းတဲ့ sputtering / တက်လာခြင်းစတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငါကဆင်းခေတ္တခဏရပ်နားခဲ့လျှင်အနိမ့်သူကပြန်ပစ်လွှတ်ပေမယ့်ပိုမြန် = ပိုဆိုးပြေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရရှိပါမည်။ ငါညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူ tinkering စတင်ခဲ့ပြီး, ဒီမော်တာကိုသာတဦးတည်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါသွားဖို့အခွအေနေမရနိုင်ပါ။ မှတ်စု၏ကိုယ့်လုံးဝထိုင်အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုအပ်နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိ, သို့မဟုတ်မော်တာနေဆဲသေဆုံးမည်မဟုတ်သည့်အတွက်လမ်းခရီးတရှောက်လုံးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ငါအင်ဂျင်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပေမယ့်ဓာတ်ငွေ့၏ဖြတ်မရသင့်နှင့်မော်တာကိုသတ်? ငါပလပ်အစားထိုးတဲ့အခါမှာနယူးပလပ်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, စက်နှိုးကွိုင်, carb အစိတ်အပိုင်းများ, လောင်စာဆီ stabilizer, ဝါယာကြိုးများ, မှတ်, etc သူတို့အပေါ်အချို့သော, အနက်ရောင် flakey gunk ခဲ့ပေမယ့်ငါပိုဆိုးမြင်ကြပြီ။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးကစတင်သောအခါအခြို့သောအပြာ / အဖြူမီးခိုးသောက်ပေမယ့်ဘာမျှမပြင်းစွာသောအ။ ငါ၏အကောင်လေးငါ့ကိုရေကန်၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်အချို့သော crappie တွင်းတွေ့ရှိခဲ့နှင့်တီကောင်ကိုရေတာမျိုးအဖြစ်သူတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း၌သူတို့ကို reels သည့်အခါကသူ၏တုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့မြင်ရန်၎င်း၏ကြောက်မက်ဘွယ်ရှိသည်။ သို့သျောလညျးအကြှနျုပျသပစ်လွှတ်ထံမှ 20 မိနစ်သောင်တင်ရချင်ကြပါဘူး။ အဆိုပါရေကန်အကြောင်းကို 500 ဧက, ကအများကြီးရေကိုဖုံးလွှမ်းရန် 3-15 မိနစ်အကြောင်း 20hp ယူသင့်ပါတယ်ပါသလဲ ဤသူသည်ငါတစ် 3hp တကယ်အသေးစားနှင့် trolls အဘို့သည်ကြီးလှပေသိ, ဒါကြောင့်ငါသေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးလှေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသက်ဆိုင်ရာတစ်ခုခုရှုမြင်မျှော်လင့်သည့် rambling အကြောင်းကိုဝမ်းနည်းပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 26 - Sat, 2017 / 10 / 54 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Sputtering by jakeboat
ဒါဟာသင် carb ချွတ် ယူ. နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နောက်တဖန် clean ဖို့လိုအပ်ပါတယ်စေခြင်းငှါအတော်လေးဖြစ်နိုင်သောနှင့်အဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ပြန်ရှင်ဖို့ယူဆောင်ဖြစ်ကြောင်းဟောင်းများကိုမော်တာတွေနဲ့ပြဿနာကိုသေးငယ်တဲ့ဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့ထဲမှာအမှုန်များနှင့်လောင်စာပေးပို့ချောင်တုန်ခါခြင်းနှင့် carburetor လမ်းကြောင်းတက်ခုံဖိနပ်လေ့ကြောင်း။ ဖြစ်ပါသည် ဒါဟာမျှော်လင့်ထားရမည်။ သငျသညျအရာခပ်သိမ်းသန့်ရှင်းရေးမှသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်သော်လည်းအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမှုအရာကိုတက်လျှော့ပေးရေးဖို့လောင်စာတုန်ခါတူသောအရာမရှိ။ ငါမော်တာအပြည့်အဝပကတိဖြစ်လေ၏ခံစားခဲ့ရမတိုင်မီကျွန်မ carburetor နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသုံးကြိမ်ဆေးကြောသန့်စင်ခဲ့ရသည်။ ဒါဟာအားလုံးကောင်းနဲ့ပုံမှန်ပါပဲ။ သင်တစ်ဦး, မြင့်သောနှစ်လယ်ပိုင်း, ဒါမှမဟုတ်အနိမ့်အကွာအဝေးအတွင်း sputtering နေတယ်ဆိုရင်, ဒီ carb အတွက်လမ်းကြောင်းဆို့နေပါတယ်ဆိုလိုနိုင်ပါ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုအပ်, သင်ကချိန်ညှိကြတခါ, တစ်ဦးတည်းကစွန့်ခွာ။ ဒါဟာမော်တာရပ်တန့်များအတွက်အသုံးပြုသည်မဟုတ်။ သင့်အနေဖြင့် carb အတွက်လိပ်ပြာအဆို့ရှင်ကိုပိတ်ဖို့သောမှတ်တိုင်အနေအထားဖို့အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာလီဗာရွေ့လျားအားဖြင့်မော်တာကိုရပ်တန့်။ သင်ကတူညီတဲ့ရာသီအတွက် carb ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအချိန် clean အသစ်တစ်ခု carb ကိရိယာအစုံမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကတင်ပြ bigrion 10: 20 - Fri, 2017 / 09 / 12 အပေါ်
တင့်ကားအတွင်းပိုင်းလောင်စာ filter ကို
အစားထိုးလှုံ့ဆျောနှင့်ဂီယာကိစ္စတွင်ဆီ, မကောင်းသောအကြံအစည် starter, carburetor နှင့်စက်နှိုးပြန်လည်ဆောက်လုပ်နှင့်ငါ့ 1966 JW21 ပေါ်ဆေးသုတ်ပိုမိုပါးလွှာနှင့်အတူကန်သန့်ရှင်း, ထိုသို့ဓာတ်ငွေ့အပြည့်အဝအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်အတူအကြီးအပြေးလေ၏။ ဒုတိယသို့မဟုတ်တတိယအချိန်ထွက် trolls ကြောင့် sputter နှင့်သေဆုံးလိမ့်မယ်။ ကမိနစ်အနည်းငယ်ထိုင်လျက်ပြီးနောက်စတင်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလအတွက် run, ထို့နောက် sputter နှင့်သေဆုံးလိမ့်မယ်။ မီးခိုးအများကြီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့, running စောင့်ရှောက်ဖို့နင်စေကြိုးကိုင်နေဖြင့်ပြန်ချဉ်းကပ်လမ်းမှရတယ်။ အကျွမ်းတဝင်အသံ?
လောင်စာ filter ကို sintered သတ္တုယူနစ်အတွက်ထွက်ပေါက်မှာတင့်ကားအတွင်းမှဖြောင့်မတ်တပ်ဆင်ထား shaped တစ်ကန်တော့ချွန်ဖြစ်ပါတယ်ထွက်နှစ်မြောက်မွေးနေ့။ အဆိုပါတင့်ကားအပြည့်အဝခဲ့သောအခါ, filter ကို၏အလုံအလောက်လုံလောက်သောလောင်စာစီးဆင်းမှုကိုခွင့်ပြုမှစွဲလန်းနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လောင်စာအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားအဖြစ်, လောင်စာဆီစီးဆင်းမှုလုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါအဲဒါကိုရှင်းလင်းဖို့ထွက်ဝက်အူဖို့လောင်စာ filter ကိုမရနိုင်ဘူး။ အကြံပေးအဖွဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်အရပ်ဌာန၌သန့်ရှင်းရေးဒါမှမဟုတ်တချို့ noxious အရည်ပျော်ပစ္စည်းနှင့်အတူ flushing reverse, ဒါမှမဟုတ်အပူနှင့် / သို့မဟုတ် Kroil လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ရနိုင်ခဲ့ပေမယ်သည်းခံခြင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ထုတ်တူးနှင့်အကြံပေးအဖွဲ့ထွက်ပေါက်နှင့် carb အကြားလိုင်းအတွက် inline filter ကိုထားကြပြီစေခြင်းငှါ, ။ အခုတော့ငါ့အ JW ကြောက်မက်ဘွယ်ပြေး! အလွန်နှေးကွေး trolls မြန်နှုန်းဆင်းငါ့အ Grumman အားကစားလှေရရှိနိုင်သည်။ ပိုကောင်းပြေးအခါတိုင်းတော့ပါ။
ငါ JOHNNYRUDES ၏ဤပုံစံ၏ Revival FOR စာရင်းလုပျဆောငျရမညျဖို့အတွက် Tank လောင်စာ Filter ကို R & R ကိုဖြည့်စွက်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကတင်ပြ သိုးထီးတကောင်ကိုဂျက် 02: 11 - Sun က, 2018 / 23 / 39 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ တင့်ကားအတွင်းပိုင်းလောင်စာ filter ကို by bigrion
ကိုယ့်တစ်ဦးဂျွန်ဆင် 3HP ဝယ် ...
ကိုယ့်တစ်ဦးဂျွန်ဆင် 3HP နှင့် sintered ကြေးဝါလောင်စာ filter ကိုသန့်ရှင်းရေးကျော်လွန်ခဲ့ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါယွန်းပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့်ပင် Muriatic အက်ဆစ်ကြိုးစားခဲ့သည်။ လောင်စာကိုသာအကြံပေးအဖွဲ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး 1 /2များအတွက်စီးဆင်းလိမ့်မယ်။ ငါ filter ကိုထုတ် ယူ. လျောက်ပတ်သောကြေးဝါ၏ sinterd ကြေးဝါ protion ဖြတ်လေ၏။ ငါဂျွန်ဆင်များအတွက်လျောက်ပတ်ပေါ်သို့သောကြေးဝါမျက်နှာပြင်ဂဟေဆက်ဖို့ကို eBay ကနေ VW တို့ဓါတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့ filter ကိုစောင့်ဆိုင်းတယ်။ သငျသညျအကွောငျးကို $ 40.00 အသစ်တစ်ခု OEM စတိုင် filter ကိုဝယ်နိုင်ပေမယ့်ငါပေးဆပ်သွားမခံခဲ့ရပါဘူး။ ငါ 750 BBS နှင့်ယွန်းပိုမိုပါးလွှာ၏အကြောင်းကိုရှစ်အောင်စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်ငါ၏အဓာတ်ငွေ့အကြံပေးအဖွဲ့သန့်စင်။ ငါလောင်စာ Filler အပေါက်များနှင့် carburetor လောင်စာ feed ကိုပေါက် plug ဖို့ harware စတိုးဆိုင်မှာအချို့ရော်ဘာပလပ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါနှစ်ကြိမ်တိုင်ကီထဲကလူနေမှုမိုဃ်းလင်းခါပြီးတော့ဖော်မြူလာ 409 နှင့်ရေနှင့်အတူကဆေး။ tank ရဲ့စင်ကြယ်သော။
ကတင်ပြ ttravis 11: 05 - Sun က, 2017 / 12 / 52 အပေါ်
LighTwin3HP က Tank Filter ကို
Glat သင်သည်သင်၏ retrofit အတူကအလုပ်လုပ်ကိုင်တယ်စကားကိုနားထောငျဖို့။ ငါအချို့ရှာဖွေအမှုကိုပြု၏။ ကြောင်း filter ကိုများအတွက် Evinrude တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရေအတွက်ကို 0594034 ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအမေဇုံပေါ်မှာမတွေ့ပေမယ့်ငါအချို့အပေါ်စာရင်းဝင်တှေ့မွငျခဲ့ ကို eBay ။
တခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်တဲ့အခါ, eBay ကိုစမ်းပါ။ အဲဒီမှာအစိတ်အပိုင်းများကိုအများကြီးမဝယ်နဲ့ကျွန်မ amazon.com အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအများကြီးကဲ့သို့တစ်ဦးကို eBay Affiliate အဖြစ် sign up ကိုရန်စီစဉ်ထားသည်။
ကတင်ပြ Raoul 01: 15 - မွန်, 2018 / 03 / 17 အပေါ်
သောငါ၏ကင်းထောက်အဖွဲ့ကငါ့ကိုပေးခဲ့ lightwin ပေမယ့်ကိုယ်တစ်ဦး 1963 evinrude ရှိ
ဒါဟာကောင်းသောမီးပွားရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ဦးခေါင်းကို ယူ. wont ပြေးနဲ့ချုံ့တကယ်မကောင်းတဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ဖြစ်ကောင်းပစ္စတင်ကွင်းဖြစ်နိုင် piston အစားထိုးရန်နှင့်ဆလင်ဒါနံရံများကိုထပ်မံရန်လိုအပ်ပါတယ်
အဆိုပါ crank ကိစ္စတွင်ဝက်ဝံအဖြစ်ကောင်းစွာထုတ်ဝတ်ဆင်ခြင်းကိုခံရပုံပေါ်
ကိုယ်မဆိုထပ်မံပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ကြည့်ဖို့အပြည့်အဝ teardown လုပ်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်မည်သူမဆိုအတွေ့အကြုံကိုဒီအင်ဂျင်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ထားပြီးသို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးပြီးပြည့်စုံပြန်ဆောက်လုပ်ဖို့ကထိုက်သည်ဆိုပါကသိတယ်လျှင်ငါ၏အမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်
အဘယ်မှာကိုယ့်အားလုံးအစားထိုး piston နှင့်ကွင်းများအတွက်အင်တာနက်ကျော်ကြည့်ရှုပေမယ့်သူတို့ကိုမဆိုအကူအညီကိုမတှေ့နိုငျအစိတ်အပိုင်းများကိုရှာဖွေ apriciated မည်ဖြစ်ကြောင်း
ကတင်ပြ ttravis 01: 22 - မွန်, 2018 / 14 / 38 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ မရဒီပါလျှင်သေချာ ... by Raoul
အဘယ်အရာကိုချုံ့သင့်ရဲ့ tester အပေါ်ကိုဖတ်ရသနည်း 70-80 psi ဖြစ်သင့်သည်။
အစိတ်အပိုင်းများတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲကြသည်။ သငျသညျက e-ပင်လယ်အော်အပေါ်တစ်ဦးအစိတ်အပိုင်းများမော်တာရှာနေချွတ်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံမှာသူတို့ကသငျသညျစိတျအပိုငျးအပေါ်သုံးစွဲသွားမည်ဟုထက်အများကြီးလျော့နည်းပိုက်ဆံအဘို့ထိုသူတို့ရှိသည်။
ကတင်ပြ Raoul 02: 12 - မွန်, 2018 / 03 / 57 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ချုံ့ဘယ်အရာကိုမ ... by ttravis
ကိုယ့်တစ်ဦးချုံ့ထားသော dont ...
ကိုယ့်တစ်ဦးချုံ့ tester ရှိ dont ပေမယ့်အိပ်ဇောအဖုံးပန်းကန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် flywheel လှည့်နှင့်သူတို့ချုံ့တက်နှင့် piston အနည်းဆုံးပျက်စီးနည်းနည်းကြည့်သည့်အခါ piston ကနေ comming hissing နားမထောင်နိုင်
ယခုအစိတ်အပိုင်းများမှာအသေးစိတ်ကြည့်ရဖို့နဲ့သူတို့ကလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဘောလုံးဆလင်ဒါ hone dingle စေခြင်းငှါ, ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဆိတ်ကွယ်ရာဖြတ် im
ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ် asume အသစ်နှင့်မရစက္ကန့်လက်ကွင်းရုံညာဘက် mesurements နှင့်ဝယ်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ထိုသို့မဆို piston ကိုရှာဖွေအတွက်မရှိမဖြစ်
ကတင်ပြ Raoul 02: 12 - မွန်, 2018 / 15 / 22 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကိုယ့်တစ်ဦးချုံ့ထားသော dont ... by Raoul
ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုယူ okey ...
ဈဆိတျကှတစ်ခုလုံးကိုအင်ဂျင်ဘလောက်ယူ okey နှင့်ဆလင်ဒါအောက်ခြေအဆုံး၌အချို့သောအလင်းအမှတ်ပေးရှိဒါယခုဈဈ့ fix ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှု overbore ရန်ရှိသည် hone နိုင်လျှင်ထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်
နှစ်ခုစလုံး piston ငရဲမှသွင်းယူကြသည်
ဒါ့အပြင်ကိုယ့် gaskets နှင့်ထိုကဲ့သို့သောနှင့်အချို့သော waterpump အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့အသေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်း၏စုံတွဲတစ်တွဲလိုအပ်ပေမယ့်ကိုယ့်ကလိုထင်ပြီးတော့အများကြီးပိုကောင်းကြည့်
ဒါကြောင့်အခု (ဈကြောင့်မကောင်းတဲ့ corosion မှပိတ်တုံးတွင်းတဦးတည်းကိုဖဲ့) ဈ2သစ်ကို piston လိုအပ်ပုံရသည်နှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝ gasket အစုံနှင့်ရေစုပ်စက်လှုံ့ဆျောအိုးအိမ်မြည်
ယခုမူကား im မျှဝက်ဝံက bearing အချို့ကိုမျိုးပိတ်ပင်တားဆီးမှုထဲသို့ချတတ်လိုသော်လည်းပင်ပန်းခံရဖို့ပုံရသည် doesnt ကြည့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုရှိသောအရာအတူ flyer
အသစ်က piston မှမဆိုနောက်ထပ်အကြံပေးချက်များနှင့်လင့်များအလွန်ကြိုဆိုကြသည်
ကတင်ပြ ricklummer 02: 16 - Fri, 2018 / 07 / 01 အပေါ်
1963 Evinrude 3hp 3303s အဏ္ဏဝါ engine.com ကြီးကြပ်မှူးကွင်း piston နှင့်ပိုပြီး
ကတင်ပြ Raoul 02: 21 - Wed, 2018 / 10 / 24 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ piston ကွင်း by ricklummer
ကိုယ့် allready ကြောင်းကြည့်ရှု ...
ကိုယ့် allready ကြောင်း site ကိုကြည့်ရှု
ကြီးကြပ်မှူးကွင်းနေဆဲရရှိနိုင်ပါသည်ပေမယ့်မူရင်းနှင့်ကြီးကြပ်မှူးနှစ်ဦးစလုံး piston တော့ဘူးလုပ်ကြသည်မဟုတ်
ပေါင်းဈတစ်ဦးဆိုင်ဖို့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကို ယူ. သူတို့တစ်တွေ litle overbored ခံရဖို့ရှိသည်တူသောကြောင့်ကြည့်
နေမကောင်းကြောင့်ပေါ်မှခလုတ်နှိပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုတကယ်ဒီအင်ဂျင်များကဲ့သို့နှင့်ဒုတိယလက်လုပ်ကွက်ဝယ်ယူအပေါ်အန္တရာယ်များကိုယူပြီးအကြောင်းမရှိအပြည့်အဝပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါက၎င်း၏မဟုတ် 200 ကျော်မယ်ဆိုရင်အခုအချိန်မှာက၎င်း၏အသစ်အ piston လီဆယ်နှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပြုသောအမှုရှိသည်ဖို့ကုန်ကျမယ့်အရာပေါ်စောင့်ဆိုင်း im နှင့် သူတို့ဆိုးဖြစ်ထွက်လှည့်လျှင် piston ကပိုစျေးကြီးတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်
မည်သူမဆို helpfull ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ piston လီဆယ်နိုငျသောနေရာအရပ်သိတယ်လျှင်ဈ allready အနည်းငယ်သောအရပ်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း, သူတို့သည်ကိုယ်တစ်ဦးကုန်သည်ကိုဆက်သွယ်ရန်ရှိသည်သော်လည်းငါ့တိုင်းပြည်အတွက်သာ evinrude ကုန်သည်ငါ၏အမော်တာများအတွက်တစုံတခုရှိ doesnt ပြောပါ
ကတင်ပြ Raoul 02: 23 - Fri, 2018 / 02 / 59 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကိုယ့် allready ကြောင်းကြည့်ရှု ... by Raoul
ကိုယ့်အချို့ထက်ပိုတူးဖော်ခြင်း ပြု. ကောင်းသောအခြေအနေအပေါငျးတို့သအထဲတွင် assambly လှည့်နဲ့ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုတွေ့ကပင်ငါ့ကိုလတ်ဆတ်တဲ့ compression စာဖတ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှိပြီးယင်း၏ကောင်းတစ်ဦးအင်ဂျင်မလုပ်ပဲသောဆိုင်နှင့်သူတို့က disassembled ခင်ကအပြေးခဲ့သည်ဟုဆိုသည်
အဆိုပါပစ္စတင်ထည်ယခုနှင့်၎င်း၏ဂုဏ်န 250 မှာစုစုပေါင်းဒီအင်ဂျင်ကိုဈရောင်းမယ်ဆိုရင်ထိုက်သည်အဘယ်အရာကို Hacking ကိုဝတ်အပေါငျးတို့သညျအခွားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူပဲကိုယ့်ရှိအဟောင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုများအတွက် piston များအတွက် 350 တစ်ကုန်ကျစရိတ်ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူပြန် လာ.
ဒါကြောင့်ကိုယ့်မူရင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်မရှိမဖြစ်သောအဆုံး၌၎င်း၏တစ်ဦး bummer ပေမယ့်အနည်းဆုံးကိုယ့်နွေရာသီ၌ငါ့လှေပေါ်သုံးစွဲဖို့တစ်စျေးပေါပဲ့ချိတ်ရ
ကတင်ပြ boatman350 09: 10 - မွန်, 2018 / 13 / 45 အပေါ်
အဆိုပါ 57 evinrude lightwinn ရှေ့ဆက်မှတပါးအခြားအဂီယာရှိပါဘူး
ကတင်ပြ ttravis 09: 10 - မွန်, 2018 / 14 / 18 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ lightwinn by boatman350
အဘယ်သူမျှမ, သင်တစ်ခုလုံးကိုလည် ...
သငျသညျပြောင်းပြန်အတွက်သွားချင်လျှင်အဘယ်သူမျှမ, သင်န်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုမော်တာလည်။ အဘယ်သူမျှမကြားနေသို့မဟုတ်ပြောင်းပြန်လည်းမရှိသောကွောငျ့ဤ "အထိုင် buster" ဟုခေါ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုအတွက်, ဒီပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။
ကတင်ပြ boatman350 09: 10 - မွန်, 2018 / 17 / 41 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အဘယ်သူမျှမ, သင်တစ်ခုလုံးကိုလည် ... by ttravis
သငျသညျအလွန်အေးမြသော ttravis ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
သင်မော်တာအပြည့်အဝ 360 လုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုယ့် woundering ခံခဲ့ရသည်အလွန်အေးမြသော ttravis ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကတင်ပြ boatman350 06: 06 - Thu, 2019 / 07 / 30 အပေါ်
အဘယ်သူမျှမကပဲရှေ့ကိုသွားနှင့်သင်က၎င်း၏ဈပြောသည်ခဲ့အထိုင် buster ကိုခေါ်ပြန်သွားကြဖို့အင်ဂျင် 180 turn
ကတင်ပြ boatman350 09: 10 - မွန်, 2018 / 13 / 53 အပေါ်
သတ္တုတွင်းအပေါ်ရေအနည်းငယ်နှင့်အတူရိုး၏နောက်ကျောအပေါ်တစ်ဦးကျမ်းပိုဒ်ဟာကိုယ့်ဘေးထွက်ထဲကအစိုင်အခဲစီးနှင့်အတူသစ်ကိုပဲ့ချိတ်မြင်ကြပြီရေငါ့အ evinrude 3hp အပေါ်ထွက်လာကြပေမယ့်ဘာမျှလည်းမရှိပါဘူးဘယ်မှာကြောင့်ကဲ့သို့ဖြစ်လို့ယူဆတယ်သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်ခိုင်မာတဲ့စီးထွက်လာတစ်နေရာရာမှာရှိ
ကတင်ပြ ttravis 09: 10 - မွန်, 2018 / 14 / 16 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ လှုံ့ဆျော by boatman350
သောအနိမ့်ယူနစ်ထဲကလက်တရေနှင့်အိပ်ဇောစုံတွဲတစ်တွဲအသေးစား hones ရှိပါတယ်။ ထွက်လာသောရေတစ်ပြင်လုံးကိုအများကြီးမရှိပါ။ မိုင်းတစ်ဦးကကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ကော်ဖီစေသည်ကဲ့သို့တူညီသောငွေပမာဏအကြောင်းပါ။
ကတင်ပြ boatman350 09: 10 - မွန်, 2018 / 17 / 38 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ သေးငယ်တဲ့စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ် ... by ttravis
ကတင်ပြ ttravis 09: 10 - မွန်, 2018 / 20 / 40 အပေါ်
ငါသည်ငါ့3HP ကစီမံကိန်းကိုမော်တာတွေနဲ့တူညီတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါလမ်းကြောင်း unclog ခဲ့ရသည်။
ကတင်ပြ boatman350 09: 10 - မွန်, 2018 / 22 / 15 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါနှင့်တူညီသောပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ် ... by ttravis
ကတင်ပြ dlofthouse 08: 01 - Thu, 2019 / 14 / 38 အပေါ်
ငါအိပ်ဇောကယ်ဆယ်ရေးမထွက်ရေပမာဏကိုတစ်ယိုကော်ဖီထုတ်လုပ်တဲ့ကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်းကိုဖြစ်သင့်သောဤ string ကိုဘတ်ရွတ်ကြ၏။ ငါငါ့ဥစ္စာအကြောင်းမပြောပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, ငါကအကြောင်းအာရုံကြောဖြစ်ကြောင်းကို, ဦးခေါင်းကိုယ်ကအပေါ်မှာငါ့လက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းမိနစ်အနည်းငယ်စမ်းသပ်ပြေးပြီးနောက်အလုံအလောက်နွေးဖြစ်ပါတယ်။ အတှေးအ?
PS - ဒီကအရမ်းအထောက်အကူဖြစ်စေ site ပေါ်တွင်ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးပို့စ်ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကတင်ပြ ttravis 08: 02 - Fri, 2019 / 13 / 57 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ရေစနစ်ပိတ်? by dlofthouse
ငါဒါမော်ဒယ် number ကိုလိုအပ်ပါတယ် ...
ငါပိုကောင်းသင်၏မေးခွန်း anser နိုင်အောင်ငါမော်ဒယ် number ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ တချို့ကမော်တာကိုအစားထိုးနိုင်မယ့်အပူထိန်းကိရိယာရှိသည် ဖြစ်. , အချို့မကျင့်။
ကတင်ပြ dlofthouse 08: 06 - အင်္ဂါနေ့, 2019 / 16 / 31 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ငါဒါမော်ဒယ် number ကိုလိုအပ်ပါတယ် ... by ttravis
မော်ဒယ် JW-15 ဖြစ်ပါသည်
ကတင်ပြ ttravis 08: 08 - Thu, 2019 / 01 / 40 အပေါ်
ကြောင်းမော်တာမအပူထိန်းကိရိယာရှိပါသည်။ ရေပမာဏညာဘက်ပုံရသည်။ သင် powerhead ပေါ်တွင်သင်၏လက်ကိုကိုင်ထားလို့မရဘူးလျှင်, အချို့ကိုသင်ကန့်သတ်စေခြင်းငှါ။ သင်ကကို clean up နဲ့တူနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကကြည့်ဘယ်အရာကိုမြင်ရန်ဆလင်ဒါခေါင်းကိုဖယ်ရှားစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ သင်ကအစားထိုးရန်အခါ, အသစ်တစ်ခုကိုဦးခေါင်း gasket သုံးစွဲဖို့သေချာပါစေ .... တွမ်
18-3841 Sierra ဌာနမှူး Gasket
ကတင်ပြ boatman350 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 08 / 07 အပေါ်
ကိုယ့် rtv gasket ထုတ်လုပ်သူကိုသုံးနိုင်သည် ...
ကိုယ်အောက်ပိုင်းယူနစ်ဖို့မော်တာများအတွက်ယာယီခေါင်းကို gasket နှင့်မိတ်လိုက်မျက်နှာပြင်များအတွက် rtv gasket ထုတ်လုပ်သူကိုသုံးနိုင်သည်
ကတင်ပြ ttravis 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 11 / 13 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ကိုယ့် rtv gasket ထုတ်လုပ်သူကိုသုံးနိုင်သည် ... by boatman350
ငါလျော်သောဦးခေါင်း gasket ရတဲ့အကြံပြုလိမ့်မယ်။ RTV ဖိအားများနှင့်အပူကိုဆီးတားဖို့လုံလောက်တဲ့အားကြီးသောမကျမည်အကြောင်းအပေါင်းကရေအကျီသို့အရပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတည်ရှိသည်ဘယ်မှာငါမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့, ဦးခေါင်း gaskets စျေးကြီးမရှိကြပေ။ ငါသည်ဤလောက၏တချို့လူတွေကခဲအချိန်အစိတ်အပိုင်းများရတဲ့ရှိသည်နှင့်ပိုပြီးကြံဖန်ရန်ရှိသည်ကိုငါသိ၏။
ကတင်ပြ boatman350 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 13 / 12 အပေါ်
ကတင်ပြ ttravis 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 13 / 26 အပေါ်
ငါ powerhead ချွတ် ယူ. ...
ငါ powerhead ချွတ် ယူ. အောက်ပိုင်းယူနစ်အတွက်အိပ်ဇောနှင့်အတူထွက် dumps ဘယ်မှာဖို့လှုံ့ဆျော input ကိုကနေရေပြည့်စုံလမ်းကြောင်းကိုခြေရာကောက်။ ကျွန်မအနေနဲ့လေထုရေပိုက်ကိုသုံးခြင်းနှင့်အတော်ကြာဒဏ်ငွေဝါယာကြိုးများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း bits သည်အရာခပ်သိမ်းကိုထုတ်ရှင်းလင်းဖို့။ ငါသည်ငါ့ 3.0 သို့မဟုတ် 5.5 စီမံကိန်းများကိုလည်းကောင်း၌ဤအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ယုံကြည်ပါတယ်။ ထိုသို့တချို့ကမျက်စိကန်းခဲ့, ဒါကြောင့်ငါလေမှုတ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လာနေရာကိုကြည့်ရှုရန်လေထုရေပိုက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာခဏတစ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းအတော်များများဟာသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ကြပြီးအလွယ်တကူပိတျဆို့နတေဲ့များစွာသောမော်တာယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
ကတင်ပြ boatman350 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 21 / 35 အပေါ်
ဟေးယောက်ျားတွေအသစ်ကပြဿနာအရမ်းရယ်ရတယ်ဦးခေါင်းကိုချွတ် ယူ. လူအပေါင်းတို့သည်ရေကျမ်းပိုဒ်ကအရမ်းတက် gummed ပေမယ် (မူရင်း gasket သုံးပြီး) ဦးခေါင်းပြန်လည်ပြီးနောက်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ယခုမော်တာယခုမစတင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် carb ချပြီးအပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်ဘဝမှ sputtered သတိပြုပါ လောင်ကျွမ်းခြင်းအခန်းသို့သော်သင်ယောက်ျားတွေအဘယ်သို့ထင်ကြဘူး .... စေသည်ဘာမျှပြီးနောက်သန့်ရှင်းတဲ့
ကတင်ပြ ttravis 09: 11 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 21 / 57 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အရမ်းရယ်ရတယ်ယောက်ျားတွေအသစ်ကပြဿနာဟေး ... by boatman350
float အပ်မှီဝဲ? သငျသညျ ...
float အပ်မှီဝဲ? သငျသညျဖြစ်ကောင်းကြောင့်ပုံမှန်အနေအထားရဲ့အတိတ်အပ်ကုိုကြည့်ရာချပါဝါခေါင်းကိုထောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကတင်ပြ ejfellman 09: 15 - Sat, 2018 / 17 / 39 အပေါ်
(btw, ကြီးသောနေသော) 3hp Lightwin အဘို့သင့်ညှိတက်ညွှန်ကြားချက်၌သင်တို့ကိုဆလင်ဒါ 1 အထက်သို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းဆလင်ဒါခေါ်ခြင်းကားအဘယ်သို့နည်း
ကတင်ပြ ttravis 09: 16 - Sun က, 2018 / 19 / 43 အပေါ်
ဆလင်ဒါ 1 အထက်ဖြစ်ပါတယ် ...
ဆလင်ဒါ 1 အထက်ဆလင်ဒါဖြစ်ပါတယ်။
ကတင်ပြ Dipstick 09: 25 - အင်္ဂါနေ့, 2018 / 16 / 03 အပေါ်
ကိုယ့်ကိုစောစော 50 ရဲ့ဂျွန်ဆင်တက်ညှိ; carb, စက်နှိုး, လှုံ့ဆျော, ထိုအကျင့်ကိုကျင့်။ ဒါဟာကောင်းသောမီးပွားရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ချက်ချင်း carburetor / လေကြောင်းတိတ်ဆိတ်ကွန်နက်ရှင်ကနေဘယ်မှာဓာတ်ငွေ့ယိုအမှတ်ဖို့, ရေကြီးရေလျှံနေပါတယ်။ ငါ carb ပြန်လည်တည်ဆောက်သည့်အခါကျွန်မကတော့ float ဖို့ကတော့ float အပ်ရရှိထားသူသောအနည်းငယ်သာနွေဦးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤအ carburetors အချို့နွေဦးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကတည်းကငါကမပါဘဲအတူတကွပြန်ထားလိုက်တယ်။ ဒါဟာရေလွှမ်း။ ဒီတော့ဌကတော့ float ပန်းကန်ကိုချွတ် ယူ. ငါသည်ငါ့အဟောင်းအစိတ်အပိုင်းများကို (ငါလေးခု3မြင်းကောင်ရေ Evinrude / ဂျွန်ဆင်ရဲ့ရှိသည်) တို့တွင်အတွေ့ရှိခဲ့တစ်ဦးနွေဦး installed ။ ဒါဟာနေဆဲရေကြီးမှုဖြစ်ပါတယ်။
ငါ 1 & 1 /2လှည့်အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းအပ်နှင့်အနိမ့်အမွနျနှုနျးအပ်3/4အလှည့်ကိုချွတ်ကျောထောက်နောက်ခံ။
နောက်စာမျက်နှာ နောက်တစ်ခု >